Pokémon TCG Online 2.48.0 Android အတွက် Aptoide APK အား ဒေါင်းလုပ် ပြုလုပ်ပါ
ဗားရှင်း 2.48.0 လွန်ခဲ့သော 1 နှစ်က
ဂိမ်းများ ကဒ် Pokémon TCG Online
Pokémon TCG Online ၏ ဖော်ပြချက်
©2016 Pokémon. ©1995–2016 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.</br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br>
Pokémon TCG Online အတွက် စတိုးအသုံးပြုသူ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
Pokémon TCG Online အပေါ် စတိုး ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုများ
Pokémon TCG Online အပေါ်တွင် ပြန်လည် စစ်ဆေးမှု မရှိပါ။ ပထမဆုံး ပြုလုပ်လိုက်ပါ!
apk-4-free စတိုး 334.92k 96.29M
Pokémon TCG Online နှင့် အလားတူသော အက်ပ်များကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ
APK အကြောင်း Pokémon TCG Online အချက်အလက်
APK ဗားရှင်း 2.48.0
ထုတျလုပျသူ The Pokémon Company International
ကိုယျရေးလုံခွုံမှု မူဝါဒ http://www.pokemon.com/us/privacy-policy/
လကျမှတျ SHA1: C8:BE:22:ED:E9:FD:6D:FE:94:2D:63:02:D3:F5:9A:1F:91:56:28:36
ထုတျလုပျသူ (CN): DWD Builds
အဖှဲ့အစညျး (O): Dire Wolf Digital
နယျမွေ (L): Denver
ပွညျနယျ/မွို့တျော (ST): CO
Pokémon TCG Online APK ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ